Kunezinhlobo ezihlukahlukene izipho bemvelo kabanzi abantu imithi ukwelapha izifo zesifazane. Indawo ekhethekile kuzo tansy nesizotha. Lapho ukubambezeleka kokuya esikhathini kutuswa nokwandisa nomjikelezo wokuya esikhathini. Indlela ukupheka ke, kulokho Isikali ukuyisebenzisa, futhi yini imithetho ukulandela? Sizozama ukuthola izimpendulo zayo yonke imibuzo, kuba ukusetshenziswa efanele kuphela anganikeza umphumela edingekayo.
imiqondo Jikelele umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi
Isinyathelo sokuqala ukuba anqume ukuthi yikuphi kukhona imigomo kokuya esikhathini ukubambezeleka. umjikelezo ezijwayelekile omdala ovuthiwe zesifazane zokhahlamba kusuka ezinsukwini ezingu-23 kuya ku-28. Nokho, umzimba womuntu awuwona kumuntu nomuntu, kanti ongakhetha kunokwenzeka isikhathi esinjalo, kukhona impela eningi, futhi awacatshangwa iyiphi ngeziphambeko futhi ezijwayelekile. Isilinganiso esikhathini Uthatha kwezinsuku ezintathu kuya iviki elilodwa, futhi lubonakala ngokuqina ubuhlungu ezincane ukopha ngokulinganisela.
Ngezikhathi ezithile kombuso ezimisiwe umzimba bangase bahluleke. Lokhu kwenzeka ngenxa yokugula, abesifazane ukuzivumelanisa nezimo ezintsha ukucindezeleka okunzima - kukhona incazelo enengqondo ukuze okuningi. Ukubambezeleka izinsuku abafinyelela kwabahlanu akubhekwa kuwuphawu okungalungile futhi akufanele kubange ukukhathazeka. Amantombazane amaningi avame ukusheshisa ukufika esikhathini isetshenziselwa ezihlukahlukene amakhambi abantu, kuhlanganise nezimbali tansy, okuyinto kuhluke kakhulu ngempumelelo.
Kuyini tansy, kunalokho ziwusizo futhi yini ingasetshenziswa?
Kuyini zalesi sitshalo esimangalisayo? Asteraceae imbali zisetshenziswa amumethe namaminerali ahlukahlukene kanye nezakhi. Kuhlanganisa izingxenye ezifana uvithamini C, carotene, acid organic, camphor nokuningi.
Flowers of tansy abalulekile ukuphulukiswa umphumela, ukuze bekulokhu kubhekwa wendabuko imithi futhi Cosmetology.
basuke ngokuvamile lisetshenziswa kakhulu:
nokwenza izitsha inhliziyo negazi;
akunika ithoni jikelele zomzimba;
nilimaza ukuphulukiswa futhi ukwelashwa isilonda;
the ukuzinza yokusetshenziswa pheshana emathunjini, ekunciphiseni gassing, ukulwa ukuqunjelwa, colic;
ukususa izibungu Giardia;
imikhuhlane, amakhala yisisu;
izinhlungu zekhanda ezinamandla, kuhlanganise migraines
iziyaluyalu kokuya esikhathini ;
eziningi nezinye izifo ezingathi sína (sifo, isifo sofuba, umalaleveva, isifo sokuwa).
Kusukela tansy akhiphe njengenhlangano amafutha abalulekile esesikhundleni imiphumela ezuzisayo on isimiso sezinzwa, isetshenziselwa ukwelapha izilonda, ukusikeka kanye imihuzuko. Ukuze ekwelapheni umzimba womuntu ngesisekelo lesi sitshalo kusho ekhiqizwa zonke izinhlobo zezinkambi, isithako nomuthi, zokugeza zokwelapha enemas.
Lapho ukuqoqa futhi kanjani ukugcina efihlekile?
Herb tansy edayiswa cishe kunoma iyiphi ekhemisi ifomu seyihleliwe, ukuhlunga amaphakethe. izinto ezinjalo akudingeki ukuba pretreated, kulula ukusebenzisa nezinye izinjongo. Uma kudingekile, ungakwazi babuthane ngokwabo inflorescences, sula kubo ugaye. Tansy ngenkuthalo ezikhulayo eRussia emaphakathi eziqhakaza cishe zonke ihlobo noma ekwindla ekuseni.
Isikhathi ilungele ukuvunwa - Agasti, uma unquma Thenga kakhulu izinto zokusetshenziswa bebodwa, banake ubumsulwa emvelweni isayithi iqoqo. Sika peduncle inflorescence, kuleso simo bayobizwa kangcono igcinwe. Tansy has impahla yayo ewusizo ezingekho ngaphezu ngemva kweminyaka emithathu yokufuna. Ngendlela omisiwe ke kugcina yonke izimfanelo zayo, umbala, nephunga, ukunambitheka, futhi iqoqo izinto eziwusizo.
Inflorescences ngobumnene olubekwa liphepha kwesokunxele kuya kwi-elisophahleni lwendlu noma emgwaqeni, ngaphansi kophahla evikelekile. Imfuneko esikhathini esizayo ukuphulukiswa esikhathini workpiece yokuphakela umoya ohlanzekile.
Uhlu contraindications ukusetshenziswa
Tansy at ukubambezeleka zokwehlukaniswa libonisa akuwona neze abesifazane. Ngokwesibonelo, amanani esiphezulu sale zemithi yemvelo iqukethe izingxenye ezinobuthi ukuthi kungabangela umonakalo emzimbeni. It is nhlobo ukusebenzisa nganoma iyiphi indlela ngesisekelo tansy ngesikhathi sokukhulelwa, ikakhulukazi zisaqala. Izingxenye lichaza ekwakheni izitshalo kubangele ukuchitheka kwesisu, wazalwa kungakabi isikhathi noma ezithinta ukuthuthukiswa efanele umbungu. Ngaphezu kwalokho, tansy akufanele isetshenziswe izingane ezincane ngoba umzimba yabo ngesisa kakhudlwana futhi ukwamukela. Izimo futhi zihlanganisa lactation high blood ekunqandeni.
izakhiwo abortifacient of tansy
Yini okufanele ngiyenze uma kubambezeleka ukukhulelwa nyangazonke ngenxa? Okokuqala, xhumana wezifo zabesifazane yakho futhi ungazami ukulungisa isimo bebodwa. Ukusebenzisa decoction of tansy ikhaya isisu izolimaza hhayi kuphela ezingenzeka embungwini, kodwa futhi impilo yakho. Ukusetshenziswa engalawuliwe yemifino ukumnika kuholela ezinkingeni ezifana kwesisu akuphelele, ukuboshwa inhliziyo, ukuthuthukiswa nokopha, okuyisimo esisongela ukuphila. Ngokuvamile, ngemva isenzo esinjalo abesifazane kukhona sina isifo, endometritis, noma ukuvuvukala ulwelwesi kwesibeletho. Uma ikhambi lemvelo ngeke kusize, futhi kungaba ukuthi ukukhulelwa kuphazamisa iqhubeka, kungaba nemiphumela ebuhlungu nakakhulu. ezinobuthi eziqukethwe inqwaba tansy, ungakulimaza ukuthuthukiswa kahle nomntwana esizalweni.
Indlela zakudala sokukhuthaza umjikelezo wokuya esikhathini futhi algorithm ngezenzo zayo
Ngakho, indlela kuyasiza tansy at ukubambezeleka zokwehlukaniswa? Umhluzi esekelwe kuvusa ukopha ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ungakwazi ukulungiselela indlela yokusebenzisa iresiphi elandelayo. Dry Gaya futhi ngesilinganiso inflorescence tansy 25 amagremu, isamba cishe lingana kuze fike isipuni nge-slide. Thela ilitha amanzi abilayo izinto zokusetshenziswa futhi ushiye sokunika ku isiphuzo imizuzu 60. Ekupheleni isikhathi esabelwe umhluzi elicwengekileyo futhi ubekwe kwisiqandisi. Kunconywa ukuba adle hhayi ningi than one-third of inkomishi tincture kathathu ngosuku. Ithuluzi kunobuciko waphatheka kabuhlungu enhliziyweni, ngakho abesifazane abaningi akuzona kumnandi ukuyisebenzisa.
Kanjani tansy at ukubambezeleka zokwehlukaniswa? umhluzi kahle okuphekwe kuvusa ukusikwa imisipha lesizalo futhi ngaleyo ndlela enza kwenqatshwa okunamandla ungqimba engaphakathi endometrium. izinqubo ezifanayo emzimbeni uqale ukopha njalo noma esikhathini.
Effect zalesi sihlahla emzimbeni ngesikhathi isikhathi eside ukuya esikhathini ukubambezeleka
Tansy at ukubambezeleka nyangazonke lingasetshenziswa njengendlela eyinhloko for ukushukuma zabo kuphela uma ukuphambuka kwesikhathi umjikelezo isikhathi kubangelwa izizathu kanye akuyona amalanga angaphezulu kwamahlanu. Uma ukulibaziseka yakho idlula isikhathi esingangehora ukuze aqiniseke ukuthi uxhumane nodokotela luhlolo kanye ezifanele izidakamizwa ukwelashwa. Kungenzeka ukuthi tansy imbiza is contraindicated ngawe. Lokhu kungenxa yokuthi lesi sitshalo iqukethe inqwaba yama-hormone isitshalo ezingathinta ingemuva lakho siqu kokubili izinto ezakhayo omubi. ukubambezeleka abalulekile umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi kungadalwa izinkinga ohlelweni endocrine kanye nokusetshenziswa kwamakhambi herbal kuphela avuse yokukhulisa izinguquko ezimbi emzimbeni. Nge kwemvume udokotela ngesisekelo ezikhishwe tansy ingasetshenziswa njengenhlangano imithi eyengeziwe.
Yimaphi amanye amakhambi kungasiza avuse nyangazonke?
Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini okumele uyenze uma senyanga ukubambezeleka esiphansi. Ngaphezu kwalokho tansy ukhona inombolo ngokwanele enkulu utshani ukuthi Ingasheshisa umjikelezo yokutakula, kodwa abaqiniseki kahle. Lezi zihlanganisa marjoram, chamomile, i-bay leaf onion ikhasi, sembabazane, fennel kanye parsley. Kunezinye izindlela angadingi ukusetshenziswa kwanoma yisiphi isithako nomuthi ethize. Ngakho, ungakwazi ukuthatha okugeza hot noma Amazing kanzima.
Uphenyo tansy njengendlela yokuthola imithi yendabuko
Indlela ukuhlola owesifazane ithuluzi ezifana tansy, ngesikhathi ukubambezeleka zokwehlukaniswa? Izibuyekezo ukuthi babeshaye esikhonkosini. Uma usebenzisa leli thuluzi ukuze kulesetayelekile amazinga ama-hormone, it has a ukusebenza kahle eliphezulu futhi ubuncane Izimo, kodwa uma unquma ukuqeda sokukhulelwa esebenzisa le ndlela, nizuze umonakalo eziphathekayo empilweni awukwazi ukukugwema.
Umhlonyane tincture: yokusetshenziswa, ngempela
Ihhotela "Metallurg", eMoscow: izibuyekezo, izithombe, ikheli